Ururada Bulshada Rayidka oo war la-yaab leh kasoo saaray go’aanada shirkii Dhuusamareeb | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Ururada Bulshada Rayidka oo war la-yaab leh kasoo saaray go’aanada shirkii Dhuusamareeb
Dowlada Ethiopia ayaa sheegtay inaysan jirin cid ka horistaagi karta isticmaalka biyaha wabiga Nile,waxana uu Wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya Gedduu Andaargaashew sheegay Itoobiya iney biyaha wabiga Nile ay u isticmaali karto ujeeddada ay rabto.
“Biyaha Wabiga Nile maanta waa la xakameeyey oo biyo-xireenka ayaa biyihi qabanaya, wabigina wuxuu hadda iisu beddelay haro aad u weyn, biyaha wabigana qulqulkiisa wuu sii wadayaa Itoobiyana harada biyaha wabiga ka sameysantay ayey sideey doonto u isticmaaleysaa” ayuu yiri wasiirka.
Warkan ka soo yeeray Wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya ayaa ku soo beegmaya xilli ay Itoobiya sheegtay biyihi looga talagalay in biyo-xireenka lagu keydiyo sanadka ugu horreeya in si buuxda looga guuleystay.
Wadamada Masar iyo Suudaanna waxay dhankooda ku adkeysanayeen Itoobiya iney billaabin buuxinta biyo-xireenka ilaa heshiis buuxa laga gaaro muranka biyo-xireenka ku gadaaman.
Previous articleEthiopia oo sheegtay inaysan jirin cid ka horistaagi karta isticmaalka Biyaha Wabiga Nile
Next articleCaynte oo shaaciyey dhinac ay awooddiisa ku wiiqantay go’aanadii Dhuusamareeb